Internal Bleeding (ကိုယ်အတွင်းဘက်တွင် သွေးယိုခြင်း ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Internal Bleeding (ကိုယ်အတွင်းဘက်တွင် သွေးယိုခြင်း )
Internal Bleeding (ကိုယ်အတွင်းဘက်တွင် သွေးယိုခြင်း ) ကဘာလဲ။
လူအများစုသည် ကိုယ်အတွင်းဘက်တွင် သွေးယိုခြင်းကို ခန္ဓါကိုယ် အပြင်ဘက်တွင် မမြင်ရသော သွေးထွက်ခြင်းအဖြစ်နားလည်ထားသော်လည်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူများအတွက်မူ သွေးထွက်သည့် နေရာအတိအကျကို ဖော်ပြနိုင်သော စကားလုံးများကို ပိုသုံးလေ့ရှိကြသည်။
ကိုယ်အတွင်းဘက်တွင် သွေးယိုခြင်းသည် ကိုယ်တွင်းရှိ တစ်သျူးများ၊ အဂါၤများ သို့မဟုတ် ခေါင်း၊ အာရုံကြောမ နေရာ၊ နှင့် ဝမ်းဗိုက်ကဲ့သို့သော ကိုယ်တွင်း ဝမ်းခေါင်းထဲတွင် သွေးယိုစီးခြင်းဖြစ်သည်။
ကိုယ်တွင်းသွေးယိုခြင်းသည် ခွဲခြားရန်ခက်ခဲပြီး စထွက်သည်မှအချိန်ကြာလာသည်အထိ မသိသာတတ်ပေ။ လက္ခဏာများသည် သွေးအများကြီး ဆုံးရှုံးသည့်အခါ သို့မဟုတ် သွေးခဲများက အဂါၤတစ်ခုခုကို ဖိသဖြင့် ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်နိုင်သည့်အခါတွင် သိသာလာလေ့ရှိသည်။
Internal Bleeding (ကိုယ်အတွင်းဘက်တွင် သွေးယိုခြင်း ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
လတ်တလော လေ့လာမှုများအရ ကိုယ်တွင်းသွေးယိုသော လူများ ပိုများလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အထူးသဖြင့် ယာဉ်မတော်တဆမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဖြစ်နိုင်ချေများစေသော အချက်များကို လျော့ချခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Internal Bleeding (ကိုယ်အတွင်းဘက်တွင် သွေးယိုခြင်း ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရောဂါလက္ဓဏာသည် သွေးထွက်သည့်နေရာ၊ သွေးမည်မျှထွက်သည်နှင့် မည်သည့် အဂါၤများ ထိခိုက်ထားသည့်ပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ကွဲပြားသည်။
ခေါင်းခွံထဲတွင် သွေးထွက်ခြင်း သည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းသို့မဟုတ် သွေးကြောဖောင်းသည့်နေရာမှ ပေါက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပြီး နာကျင်မှုကို ခံစားရလေ့ရှိသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲသော လက္ခဏာများကို တွေ့ရတတ်သည်။ ဦးနှောက်အောက်တွင် သွေးယိုခြင်းကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် ဇက်ခိုင်ခြင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဝမ်းခေါင်းထဲတွင် သွေးယိုခြင်းသည် လက္ခဏာမရှိတတ်ပဲ နာကျင်မှုသာ ဖြစ်တတ်သည်။ သွေးထွက်များလျှင် လူနာသည်အားနည်းခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အသက်ရှူကြပ်ခြင်း၊ နှင့် အခြားသော သွေးလန့်ခြင်းနှင့် သွေးပေါင်ကျခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။
ဆီးထဲတွင် သွေးပါခြင်းသည် ဆီးလမ်းကြောင်းတစ်လျောက် ကျောက်ကပ်မှစပြီး ဆီးအိမ်အထိ တစ်နေရာတွင် သွေးထွက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆီးအိမ်တွင်ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့်လည်း ဆီထဲတွင် သွေးပါတတ်ပြီး ကျောက်ကပ်နှင့် ဆီးအိမ် ကင်ဆာကဲ့သို့သော အခြားသော အကြောင်းရင်းများကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အကြောင်းရင်းများကို လူနာ၏ လက္ခဏာများ၊ အသက်၊ နှင့် ကျန်းမာရေးရာဇဝင်ကို ကြည့်ပြီး ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
စောစီးစွာ သိရှိခြင်းနှင့် ကုသခြင်းသည် အခြေအနေကို ပိုဆိုးမလာစေရန်၊ အရေးပေါ်အခြေအနေမရောက်စေရန် ကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ပြင်းထန်သော အခြေအနေမရောက်ခင် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Internal Bleeding (ကိုယ်အတွင်းဘက်တွင် သွေးယိုခြင်း ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သွေးထွက်ခြင်းသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကြောင့် အများဆုံးဖြစ်ပြီး၊ အခြေအနေပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။ သွေးထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သော အင်အားကို မည်မျှသုံးလိုက်သည် ပေါ်တွင်လည်း မူတည်သည်။ အချို့လူများသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရှိပဲ အလိုလျောက် သွေးထွက်တတ်သည်။
တုံးသည့် အရာနှင့် ထိခိုက်မိခြင်း – လူအများစုသည် အမြင့်မှပြုတ်ကျခြင်းနှင့် ကားမတော်တဆဖြစ်ခြင်းသည် ခန္ဓါကိုယ်ကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာဖြစ်စေရန် လုံလောက်သော အင်အားကို ဖြစ်စေသည်။
စုတ်ပြဲသွားသော ထိခိုက်မှု သည် ခန္ဓါကိုယ် အတွင်းပိုင်းရှိ အဂါီများကို လှု့ပ်ခါလိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် သွေးကြောများကို ပြဲစေပြီး သွေးထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
အရိုးကျိုးခြင်းသည် လည်း သွေးယိုခြင်းဖြစ်စေသည်။
အလိုအလျေက်သွေးထွက်ခြင်း- အတွင်းဘက်ရှိ အဂါီများတွင် သွေးထွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ သွေးကျဲဆေးများသောက်သော လူများနှင့် သွေးရောဂါရှိသော လူများတွင် အဖြစ်များသည်။
အစာအိမ်လမ်းကြောင်းတွင် သွေးယိုခြင်းသည် ဆေးသောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်ပြီး၊အများစုသည် NSAID ဆေးများဖြစ်သည်။ အရက်သောက်ခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်သည်။
Internal Bleeding (ကိုယ်အတွင်းဘက်တွင် သွေးယိုခြင်း ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Internal Bleeding (ကိုယ်အတွင်းဘက်တွင် သွေးယိုခြင်း ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရောဂါရှာခြင်းသည် သင့်ကို ရောဂါရာဇဝင်မေးမြန်းခြင်းနှင့် စတင်သည်။ ထို့နောက် စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး မည်သည့် နေရာတွင် သွေးထွက်သည်ကို ရှာဖွေရသည်။
သွေးစစ်ခြင်းကို သွေးအားနည်းခြင်းကို သိနိုင်ရန် စစ်သည်။ သို့သော် သွေးထွက်ခြင်းသည် အလွန်မြန်လျှင် အစပိုင်းတွင်သွေးနီဥသည် ပုံမှန်ပင်ရှိလိမ့်မည်။
ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းသည် အထဲရှိ သွေးထွက်သည့်နေရာကို သိရန်ဖြစ်သည်။ CT scan, MRI, endoscopy နှင့် colonoscopy တို့ကို သုံးကြသည်။
Internal Bleeding (ကိုယ်အတွင်းဘက်တွင် သွေးယိုခြင်း ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အစပိုင်းတွင် ကုသမှုတွင် မည်သည့်လူနာမဆို အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ အသက်ရှုနှုန်းနှင့် သွေးစီးဆင်းမှုကို စစ်ဆေးပြီး သေချာစေရန် စစ်ဆေးရသည်။
သွေးထွက်သည့် နေရာနှင့် အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ကုသမှုများ ကွဲပြားနိုင်သည်။ အခြေခံသည် သွေးထွက်ခြင်းကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး အရင်းမမြစ်တွင် သွေးထွက်ခြင်းကိ ုရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သည်။ သွေးထွက်စေသော နေရာတွင် ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းကို ပြုပြင်ပေးရမည်။
ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းကို သက်သာစေနိုင်သော အိမ်တွင်းကုထုံးများ သို့မဟုတ် နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲနည်းများ ရှိပါသလား။
-ကိုယ်တွင်းသွေးယိုခြင်းဖြစ်လျှင် လူနာသည် သွေးလန့်သည့် လက္ခဏာနှင့်လာပြီး အရေးပေါ်ဆေးကုသခြင်းကို လိုအပ်နိုင်သည်။ လူနာသည် ပက်လက်လှဲနေရန်လိုအပ်ပြီး ခြေထောက်ကို မြှောက်ထားရန်လိုသည်။
သို့သော် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကြောင့်သွေးယိုလျှင် လည်ပင်း သို့မဟုတ် ခါးဆစ်ရိုးကို ထိခိုက်နိုင်သည့်အတွက် အရေးပေါ်ဆရာဝန်မှ မစမ်းသပ်ခင် လူနာကိ ုမရွှေ့သင့်ပါ။
လူနာတွင် လေဖြတ်သည့်လက္ခဏာရှိလျှင် ဦးနှောက် လုပ်ဆောင်ချက်များကျဆင်းခြင်းသည် ဦးနှောက်ထဲတွင်သွေးယိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခြင်းနှင့် သွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ခြင်းကို မခွဲခြားနိုင်သောကြောင့် အရေးပေါ်စစ်ဆေးကုသမှုများလိုအပ်သည်။
Internal bleeding. https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_bleeding. Accessed Mar 2, 2017.
Internal bleeding. http://www.healthline.com/symptom/hemorrhage. Accessed Mar 2, 2017.
Internal bleeding. https://www.hg.org/article.asp?id=21727. Accessed Mar 2, 2017.